ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 32.4 အလှူရှင်များသို့ ကျေးဇူးတင်လွှာ
ဒီရက်ပိုင်း ဆမိတ်ခုံရွာက ကလေးငယ်များအတွက် နောက်ထပ် အလှူငွေ လေးသိန်း ထပ်ရပါတယ်..။ အလှူရှင်နှစ်ယောက်စလုံး စင်္ကာပူ ကပါ..။
အလှူရှင်နှစ်ယောက်ထဲက ညီမငယ်က သူ့မိဘနှစ်ပါး နာမည်ကို အလှူရှင်နေရာမှာ ထားပြီးလှူပေးဖို့ ပြောရင်း တသိန်းလွှဲလိုက်တာပါ..။
နောက် ညီငယ်လေး တစ်ယောက်ကတော့ အကို့ရွာက ကလေးငယ်များရဲ့ အနာဂါတ်အတွက် စီမံပါ ဆိုပြီး သုံးသိန်း လှူပါတယ်..။ ကျွန်တော့်ဆီ တကူးတက သုံးလေးခါလောက် စင်္ကာပူက နေ လှမ်းဖုံးဆက်ပြီး စကားပြောဖြစ်ကြတာမို့ သူ့အကြောင်း သူ့ဘ၀ သူ့ခံယူချက်ကို ကျွန်တော် သိရပါတယ်..။
အခုထိ လှူကြတာ ငါးယောက် ရှိပါပြီ..။ အလှူငွေ က စုစုပေါင်း ဆယ့်တစ်သိန်း ခုနှစ်သောင်း ပေါ့..။ မရည်ရွယ်မမျှော်လင့်ပဲ ဖြစ်လာတဲ့အပြင် အလှူရှင်များရဲ့ ဦးတည်ချက် စေတနာက ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်လွန်း တာမို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အားရ၀မ်းသာ မုဒိတာ ပွားရပါတယ်..။
ကျွန်တော့်သမီးငယ် တစ်နှစ်ခွဲလောက်မှာ အပြင်းအထန် ဖျားပါတယ်..။ လင်မယားနှစ်ယောက် ပြာတောက်ပြီး နောက်ဆုံး သမီးငယ်ကို ကလေးဆေးရုံမှာ တင်လိုက်ရပါတယ်..။ ဆေးရုံရောက်တော့ တယောက်အိပ် ကုတင်တစ်လုံးကို ကန့်လန့်ဖြတ်သုံးပိုင်း ပိုင်းပြီး ကလေးငယ် သုံးယောက် ထားရတဲ့ အထိ ကလေးငယ်တွေ ဒုက္ခရောက်နေတာ မြင်ရတော့ တပူပေါ် နှစ်ပူဆင့် ကျွန်တော် အတော် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်..။
ဆေးရုံအ၀င်ဝ လူနာအတက်အဆင်း ဂရပ်မှာ နေ့စဉ် အဆုံးအပါး အလေအလွင့် စာရင်းကလည်း အဲဒီရက်ပိုင်းမှာ လေးငါးယောက်ကနေ တခါတရံ ဆယ်ဂဏန်းအထိ ရှိနေတာ ဖတ်ခဲ့ရပြန်တယ်..။
ရာသီအကူးအပြောင်း ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ချိန်လိုမျိုး နဲ့ ကြုံလို့ ၀န်နဲ့အား မမျှတဲ့ အကျိုးဆက်တွေ မြင်ခဲ့ရတယ် ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော့် ရင်မှာ အတော်မချိ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်..။ တဆက်တည်း ၀န်နဲ့အား ဘာလို့ မမျှရတာလဲ ဆိုတဲ့ အတွေး ခေါင်းထဲ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်..။
ရန်ကုန် လို မြို့ကြီးမှာ ဘာလို့ ကလေးဆေးရုံ တစ်ရုံထဲ ရှိနေခဲ့ရပါသလဲ..။ နောက်ထပ် ကလေးဆေးရုံ ထပ်ဆောက်ဖို့ မလိုတော့လို့ လား..။ နှစ်စဉ် ရာသီအကူးအပြောင်းတိုင်း ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ရောဂါ ဘယတွေကြောင့် ဆေးရုံရောက်လာတဲ့ ကလေးငယ်များထဲက တချို့ ကြွေလွင့်သွားတာဟာ ဘယ်သူမှ မတတ်နိုင်တဲ့ ကံတရားရဲ့ စေစားမှုလား..။
ကျောင်းကြီးတွေ ဆောက် ဘုရားကြီးတွေဆောက်.. ထမင်းရေချောင်းစီး အလှူကြီး ပေးနေကြသူတွေ ရဲ့ စေတနာသဒ္ဒါတရားဟာ ကလေးဆေးရုံဆီ ဘာကြောင့် ရောက်မလာရတာလဲ..။ ဘယ်အချက်တွေက သူတို့လက်ရှိအလှူတွေဟာ ကလေးဆေးရုံကို လှူတာထက် ပိုသာမြင့်မြတ် ကောင်းမွန်တယ်လို့ တွန်းအား ပေးနေခဲ့ပါသလဲ..။
စတဲ့ မေးခွန်းပေါင်း များစွာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်လှန်မေးခွန်းထုတ်ရင်း ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးရဲ့ အလှူတွေ အကြောင်းကို ကြုံရင် ကြုံသလို ဝေဖန် စစ်ကြောတတ်လာပါတယ်..။
မြန်မာလူမျိုး အများစုဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်တာမို့ သူတို့ရဲ့ အလှူအတန်းဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်ဟာ ဗုဒ်ဓ့ဘာသာက ဆင်းသက်လာတာဖြစ်မယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်..။ အဲဒါနဲ့ပဲ မြတ်စွာဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ. အလှူအတန်းဆိုင်ရာ သဘောထားကို သူပြောငါပြောတွေ အသာထားပြီး ကိုယ်တိုင် လေ့လာကြည့်ခဲ့မိပါတယ်..။
အလှူရှင်များရဲ့ ကျေးဇူးတရားကို ကျွန်တော်လက်လှမ်းမီသလောက် လေ့လာထားတဲ့ (တနည်းအားဖြင့် သဘောကျ နှစ်ခြိုက်လက်ခံထားတဲ့ ) ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်ရဲ့ အလှူဒါန ဆိုင်ရာ အမြင်များနဲ့ ပြန်လှန်ဆပ်ခွင့် ပေးပါလို့ တောင်းဆိုရင်း ကျန် ညီအကိုမောင်နှမတွေပါ ကြိုက်သော်ယူ. မကြိုက်ရင် ပယ်နိုင်စေဖို့ .. မျှဝေလိုက်ရ ပါတယ်..။
၁) မိထွေးတော်ဂေါတမီအား အလှူဒါနဆိုင်ရာ ဟောချက်
နြိေ၈ာ ဓါ ရုံ မှာ မဟာပဇာပတိ ဂေါတမီ နှင့် ညီတော်အာနန္ဒာကို မြတ်စွာဘုရားက တသီးပုဂ္ဂလ အလှူ နဲ့ ဘုံအလှူ ဘယ်ဟာက ပိုပြီး အရေးပါ အကျိုးများ ကြောင်း ဟောခဲ့ပါတယ်..။
အဲသလို ဟောဖို့ ဖြစ်လာတာက.. မိထွေးတော် ဂေါတမီက ကိုယ်တိုင် ၀ါဖတ်.. ကိုယ်တိုင် ဗိုင်းငင် ..ကိုယ်တိုင် သစ်ခေါက်ဆိုး ကိုယ်တိုင် ရက်ကန်းယက်ထားတဲ့ သင်္ကန်း ကို မြတ်စွာဘုရားထံ ကပ်လှူ ရာက စလာခဲ့တာပါပဲ..။
ဘုရားက မိထွေးတော် ဂေါတမီ ကိုယ်တိုင် အပင်ပမ်းခံ စိတ်ရှည်လက်ရှည် စီမံလာခဲ့တဲ့ သင်္ကန်းကို လက်ခံတော် မမူဘဲ “ ဂေါတမီ၊ ဒါကို သံဃာအား လှူလိုက်ပါ.. ဒါက ပိုပြီး သင့်မြတ်တယ် ” လို့ ပြောတော့ ဂေါတမီက
“ အသျှင့်အတွက် ရည်ရွယ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ” လို့ ပြန်လျှောက်ထားတယ်..။
“ သံဃာကို လှူတာဟာ ဗုဒ္ဓကို လှူပြီး ဖြစ်သွားပါတယ် ဂေါတမီ ” လုိ့ ဘုရားကလည်း ဆက်ပြောတယ်..။
ဒါပေမယ့် ဘုရားကိုပဲ ဦးတည် လှူဒါန်းချင်နေတဲ့ မိထွေးတော်ဂေါတမီက “ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရှင့်အတွက်မို့ ဒါကို လက်ခံပါ ” လို့ ဇွတ်လျှောက်ထားတောင်းဆိုပြန်တယ်..။
ဗုဒ်ဓ့ကလည်း အလျော့မပေးဘဲ “ သံဃာဟာ အလွန်ပူဇော် ထိုက်ပါတယ် ဂေါတမီ ” လို့ ပြောပြန်တယ်..။
အဲဒီအချိန်မှာ ဘေးက နားထောင်နေတဲ့ ညီတော် အာနန္ဒာက မနေနိုင်တော့ဘဲ ၀င်လျှောက်တယ်..။
“ တပည့်တော် ၀င်လျှောက်ပါရစေ အသျှင်၊ ဂေါတမီ ဟာ ကျေးဇူး များသူဖြစ်ပါတယ်..။ သူ့လုပ်အားကို အားပေးတဲ့အနေနဲ့ လက်ခံ ဖို့ ပန်ကြားပါရစေ အသျှင် ”
ညီတော် အာနန္ဒာ အဲသလို ပြောတော့ ဗုဒ္ဓက
“ အာနန္ဒာ၊ ဂေါတမီဟာ ငါ့အတွက် ကျေးဇူးကြီးလှပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ငါ့အဆုံးအမကို လိုက်နာ နေသူဆီက ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့ အနေနဲ့ ရိုသေပေးကမ်းခြင်း ပြုလုပ်တာကို သင့်မြတ်တယ်လို့ ငါ မယူဆဘူး ”
“ အာနန္ဒာ၊ တသီးပုဂ္ဂလ အလှူ နဲ့ ဘုံအလှူ ရယ်လို့ နှစ်မျိုး ရှိတယ်။ တသီးပုဂ္ဂလ အလှူတွေရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးဟာ ပြောမကုန်အောင် များတာတွေ ရှိတယ်..။ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးအများဆုံး လို့ ပြောရလောက်တဲ့ တသီးပုဂ္ဂလ အလှူကပေးစွမ်းတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးဟာ ဘုံအလှူတစ်ခုက ပေးစွမ်းမယ့် အကျိုးကျေးဇူးထက် ပိုတယ်လို့ ငါလက်မခံနိုင်ဘူး ”
“အာနန္ဒာ၊ အလှူ ဟာ လေးမျိုး ရှိတယ်..။ ”
၁) ပေးသူ(လှူသူ) ချို့တဲ့ တဲ့ အလှူ
၂) ယူသူ (အလှူရရှိသူ) ချို့တဲ့ တဲ့ အလှူ
၃) နှစ်ပါးစုံ ချို့တဲ့ တဲ့ အလှူ
၄) နှစ်ပါးစုံ ပြည့်စုံတဲ့ အလှူ ရယ်လို့ ဖြစ်တယ်..။
“ အာနန္ဒာ၊ ရိုးရိုးသားသား မပေးလှူခြင်း ( အမျှော်အခေါ် နှင့်ပေးခြင်း ) ဟာ ပေးသူချို့တဲ့ တဲ့ အလှူဖြစ်ပြီး ရိုးရိုးသားသား လက်မခံခြင်း (အသုံးမလိုဘဲ လက်ခံခြင်း ) ဟာ ယူသူချို့တဲ့တဲ့ အလှူဖြစ်တယ် ”
.. ... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... ..... .....
ဆိုတော့.. အဲဒီ ဟောချက်ကို ဖတ်ပြီး ကျွန်တော်တွေးတယ်..။ ဗုဒ္ဓက တသီးပုဂ္ဂလ ဦးတည်ပြီး လှူတာထက်.. ဘုံ သဘောမျိုး လှူတာကို ပိုအားပေးတယ်..။ ပုဂ္ဂိုလ် ကြည်ညိုပြီး လှူတာထက် အဖွဲ့အစည်းကို ဦးတည်လှူတာမျိုးကို သာဖြစ်စေချင်တယ်..။ တကယ်လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ နေရာကို သူလိုအပ်နေတာသိပြီး ကိုယ်လဲ အကျိုးရ သူလဲ အကျိုးရ .. ဘေးဘယ်ညာသူတွေလဲ အဲဒီအလှူပေါ်က အကျိုးရ.. ရေရှည်သဘောလည်း ဆောင်တဲ့ အလှူမျိုးကို ဗုဒ်ဓ့က အကျိုးများတဲ့အလှူလို့ ပြောခဲ့တယ်..။
၂) ကောသလမင်းကြီးကို ဟောတဲ့ အလှူဒါနဆိုင်ရာ ဟောချက်
နောက် ကောသလ မင်းကြီး လျှောက်ထားမေးမြန်းလို့ အလှူဒါန ဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓ ဟောချက် တခု ရှိသေးတယ်..။
ကောသလမင်းကြီး က “ ဘယ်သူ့ လှူရင် ကောင်းမလဲ ” လို့ ဘုရားကို လျှောက်ထားတော့ “ ခင်မင် တဲ့သူကို လှူတာ ကောင်းတယ် ” လို့ ဗုဒ္ဓ က ပြန်ပြောတယ်..။
အဲဒီမှာ ကောသလမင်းကြီးက အမေးပြန်ပြင်ပြီး မေးရတယ်..။ “ ဘယ်သူ့လှူရင် အကျိုးများမလဲ ” ပေါ့..။
အဲသလို မေးရင်တော့ အဖြေက တမျိုး ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဗုဒ္ဓက ပြန်ပြောပြီး “ကဲ .. သင့်အမေးအဖြေပေါ်အောင် သင့်ကို မေးခွန်းနည်းနည်း ပြန်မေးရမယ် ” ပြောတယ်..။
မေးပုံက စစ်ဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ လေးသည်တော် လိုနေလို့ လေးသည်တော်တွေ ခေါ်တယ်..။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရည်အချင်းက အမျိုးမြတ်ရမယ်.. သင့်တင့်တဲ့ အသက်အရွယ်ဖြစ်ရမယ်.. ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကောင်းရမယ်.. လေးပစ် တတ်ရမယ်.. ဆိုပါစို့တဲ့..။
အမျိုးတော့ မြတ်တယ်.. ဒါပေမယ့် လေးမပစ်တတ်ဘူးဆို ခန့်မလား လို့ ကောသလမင်းကြီးကို ဗုဒ္ဓက မေးတယ်..။
အမျိုးမြတ်ပေမယ့် လေးမပစ်တတ်ဘူးဆို.. ဘယ်ခန့်လို့ဖြစ်မလဲ လို့ ကောသလမင်းကြီးက ပြန်ဖြေလျှောက်ထားတယ်..။
ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကောင်းမွန်တယ်.. လေးတော့ မပစ်တတ်ဘူး ဆိုရင်ကောလို့ ဗုဒ္ဓက မေးပြန်တယ်..။
အဲဒါဆိုရင်လဲ ခန့်လို့ မဖြစ်ပါဘူးလို့ ကောသလက ပြန်ဖြေတယ်..။
အဲဒီမှာ ဗုဒ္ဓက “ ဘယ်သူ့လှူရင် အကျိုးများမလဲ ” ဆိုတဲ့ မင်းကြီးရဲ့ အမေးကို ဖြေရရင် အလှူခံတဲ့သူက ဘယ်လောက် အမျိုးမြတ်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လောက် ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတင့်တယ် တဲ့သူ ဖြစ်ဖြစ်.. ရာဂဒေါသမကုန်တဲ့ သူဆိုရင် အဲဒီသူကို လှူရတာဟာ အကျိုးမဲ့ဖို့ပဲ ရှိတယ်..။ အကျိုးများတဲ့အလှူဆိုတာ.. ရာဂဒေါသကုန်သူ နဲ့ ကုန်အောင် ကျင့်ကြံနေသူတွေကို လှူခြင်းပဲ..။ လို့ ပြောတယ်..။
... .... ဆိုတော့ ဘယ်သူ့လှူရင် အကျိုးများမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဗုဒ္ဓဖြေသွားခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဒါနဆိုင်ရာ အတွေးအမြင် တစေ့တစောင်းကို ကျွန်တော်တို့ နားလည်ခံစားခွင့်ရပါတယ်..။ အပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့ တသီးပုဂ္ဂလ ထက် အဖွဲ့အစည်း(ဘုံ)အလှူကို ဗုဒ္ဓက ပိုအားပေးတယ်..။
သို့သော် ဘယ်သူ့လှူရင် အကျိုးများမလဲ လို့ တသီးပုဂ္ဂလ ဆန်ဆန် မေးခဲ့ရင်တော့ ရာဂဒေါသကုန်နေသူနဲ့ ကုန်ရာကုန်ကြောင်း ကျင့်ကြံနေသူကို လှူမှ အကျိုးများမယ်လို့ ဗုဒ္ဓက ဟောတယ်..။ ရာဂဒေါသကုန်သူ နဲ့ ကုန်ရာကုန်ကြောင်းကျင့်ကြံနေသူတွေဟာ.. လောကကိုငြိမ်းချမ်းစေမယ့် လူတွေပဲ..။ လောက ငြိမ်းချမ်းရာငြိမ်းချမ်းကြောင်း ဖော်ဆောင် နေသူတွေပဲ..။
အဲဒီသူတွေကို ပံ့ပိုး လှူဒါန်းတာဟာ.. လောကငြိမ်းချမ်းရေးကို ပံ့ပိုးတာနဲ့ အတူတူပဲ..။ လောကငြိမ်းချမ်းရင် ကိုယ်တင်မက.. အားလုံး အကျိုးများစေတာပဲ..။ ဒါကြောင့် အဲဒီလိုမျိုးအလှူကို အကျိုးများစေတဲ့ အလှူလို့ ပြောခဲ့တာပဲ.။
( တခုတော့ ရှိတာပေါ့လေ.. ရာဂဒေါသကုန်သူ ဆိုတဲ့ ယေဘုယျ အပြောလောက်နဲ့တော့ မလုံလောက်ဘူးပေါ့..။ ရာဂ ဆိုတာ ဘယ်လို.. ဒေါသ ဆိုတာ ဘာ ဆိုတဲ့ တိကျသေချာတဲ့ ရှင်းလင်းချက် နဲ့ တွဲပြောရင်တော့ ရာဂဒေါသကုန်သူ ဆိုတာ ဒီလိုလူကိုးလို့ လူတိုင်း မြင်သာထင်သာ ရှိမှာပါ .. လက်တွေ့မှာက ဒေါသ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုတောင် ဘုရားဆိုလိုရင်း ထိမိအောင် ဖွင့်ဆိုဖို့ ခက်နေကြရတယ် .. ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကောသလမင်းကြီးကို ပြန်လှန်မေးခွန်းထုတ်ရင်း ပြောဆိုခဲ့တဲ့ ဥပမာမှာ ထင်ရှားတဲ့ အချက်ကတော့ လေးသည်တော် လိုအပ်နေတဲ့ အဓိက အရည်အချင်းက လေးပစ်တတ်ဖို့ ပဲ လို့ မီးမောင်းထိုးပြခဲ့တယ်..။ ဆိုတော့ အလှူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်မျှော်မှန်းချက် ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကို တိကျရှင်းလင်းသေချာအောင် စောကြောကြည့်ဖို့ လိုလိမ့်မယ်လို့ ဗုဒ္ဓက ညွှန်ပြခဲ့တယ်..)
အခုခေတ် ပြောပြောနေတဲ့ လှူဖွယ်ပစ္စည်း.. လှူချင်တဲ့ စေတနာ.. အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်.. လှူမယ့် ပုဂ္ဂိုလ် .. လေးမျိုးစုံရင် ပြီးရော ဆိုတာမျိုး.. စေတနာ သုံးတန် ပြတ်ရင် ပြီးရောဆိုတာမျိုး .. ခပ်ကြမ်းကြမ်း အလှူဒါန ဆိုင်ရာ အမြင်တွေက ဗုဒ္ဓဖြစ်စေချင်ခဲ့တဲ့ အလှူဒါနဆိုင်ရာ အမြင်လားဆိုတာတော့ ဝေဖန်စမ်းစစ် ကြည့်ကြဖို့ပါပဲ..။
၃) ရှင်သာရိပုတ္တရာကို ဟောတဲ့ ဒါနဆိုင်ရာ ဟောချက်
နောက်ဟောချက်တခုကတော့ အလှူဒါန ခုနှစ်မျိုး အကြောင်းပဲ..။ လူတွေ ဘာကြောင့် လှူကြတန်းကြ ဆိုရင် ခုနှစ်မျိုး ရှိတယ်လို့ ဗုဒ္ဓက ခွဲခြမ်းပြတယ်..။ အဲဒါတွေက..
၁) နောင်ဘ၀အတွက် မြုပ်နှံဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ ဒါန
၂) ကုသိုလ်ရတယ် ဆိုပြီး လုပ်တဲ့ ဒါန
၃) မရှိတဲ့သူကို ရှိတဲ့သူအနေနဲ့ ပေးကမ်းတဲ့ ဒါန
၄) မိဘမျိုးရိုး ထုံးစံအရ ပေးတဲ့ဒါန
၅) ဂုဏ်ရှိသူတွေ အတုခိုးပေးတဲ့ ဒါန
၆) စိတ်ချမ်းသာ ၀မ်းသာဖို့အတွက် လုပ်တဲ့ ဒါန
၇) အတွေးအခေါ်ရဲ့ ရိက္ခာအဆင်တန်ဆာအဖြစ် ပေးလှူတဲ့ ဒါန ( ပါဠိလို စိတ္တာလင်္ကာရ ) ပဲ..။
အဲဒီအလှူခုနှစ်မျိုးမှာ ရှေ့ခြောက်မျိုးက လူတိုင်း လွယ်လွယ် နားလည်နိုင်ပေမယ့် နောက်ဆုံးအလှူကိုတော့ ဘုရားဟောခဲ့တယ်ဆိုတာတောင် မသိကြပါဘူး..။ လက်ရှိအလှူဒါန ဆိုင်ရာ အတွေးမြင်တွေကလဲ.. ရှေ့ခြောက်မျိုးထဲက မထွက်နိုင်လောက်ကို ဖြစ်နေခဲ့တာလဲ ပါပါတယ်..။
တကယ်တမ်း (ကျွန်တော့်သဘောအရ) အကျိုးကျေးဇူးအများဆုံး အလှူဒါနက နောက်ဆုံး နံပါတ်ခုနှစ်ပဲ..။ အဲဒီအလှူမျိုးက ကျွန်တော် နားလည်သလို ပြောရရင် လှူမယ့်သူက အလှူခံသူရဲ့ လုပ်ငန်းမှာ လောက အကျိုးများပုံမြင်ပြီး ဒီလုပ်ငန်းကို ဆက်လက်တိုးတက် လုပ်ကိုင်နိုင်အောင် ရည်ရွယ်ပြီး လှူဒါန်းတာမျိုး ပဲ..။
ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငဲ့ပြီး လှူတာမျိုး မဟုတ်ဘူး..။ ကိုယ့်တွက်ကိုယ့်တာ ကြည့်ပြီး လှူတာမျိုးလဲ မဟုတ်ဘူး..။ လုပ်ငန်း (သို့) အဖွဲ့အစည်းကို ငဲ့ပြီး လှူတာမျိုး ပဲ..။ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကောင်းရာမွန်ရာ ဖြစ်ကြောင်း လောကအကျိုးများကြောင်းကို ငဲ့ပြီး လှူတာမျိုးပဲ..။
လုပ်ငန်း အောင်မြင်ရင် အောင်မြင်သလောက် အကျိုးကျေးဇူးကြီးမား စေတဲ့ အလှူပဲ..။ ကိုယ်ကျိုးရတာလောက်လဲ မကဘူး..။ သူကျိုးရတာလောက်လဲ မကဘူး..။ လုပ်ငန်းနဲ့ ထိစပ်နေသူမှန်သမျှ အကျိုးကျေးဇူး ရစေတဲ့ အလှူပဲ..။
ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဓမ္မဆိုင်ရာ အလှူဒါန ဟောချက်တွေဟာ.. လူတိုင်း လက်လှမ်းမီတဲ့ လူတိုင်း သိနိုင်တဲ့ အတွေးမြင်တွေပါပဲ..။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအတွေးအမြင်တွေက ပေါက်ဖွားပေးလိုက်တဲ့ လက်တွေ့ အလှူဒါန တွေက ဗုဒ်ဓ့ပြောခဲ့သလို အကျိုးတကယ်များတဲ့ အလှူတွေမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ ကျွန်တော်ဖြင့် မကြာခဏ ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်ရပါတယ်..။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ပြောရရင်တော့.. ဆမိတ်ခုံ ရွာက ချို့တဲ့ရှာသူ ကျောင်းသားကလေးများရဲ့ အနာဂါတ်ကို ရေရှည် အကျိုးကျေးဇူးပေးစွမ်းမယ့် အဖွဲ့အစည်းလေး တခု ကျွန်တော်တို့ ဖွဲ့စည်းပြီး ဗုဒ်ဓ့ဟောခဲ့သလို အကျိုးကျေးဇူး တကယ်များတဲ့ အလှူဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်..။
အဲဒါဟာ. လှူသူ အကျိုးရတာလောက်လဲ မကပါဘူး..။ အလှူလက်ခံရရှိတဲ့ ကလေးငယ်တွေ အကျိုးများတာလောက်နဲ့ လဲ မပြီးစေရပါဘူး..။ သူတို့ ကတဆင့် ဆက်နွှယ်ပျံ့လွှင့် ထိစပ်လေရာ ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်း အကျိုးကျေးဇူး ရတဲ့ အထိ ဦးတည်လုပ်ဆောင်ပါ့မယ်..။
အလှူရှင်များနဲ့ တကွ.. ဘလော့ဂ်ကြွလာ ဆွေသဟာများ.. ကျန်းမာစွာ ချမ်းသာကြပါစေဗျား..။
Posted by navana at 1:25 PM
Labels: 32 ဆီမီးခုံရွာကို လွှမ်းခြုံသွားသော အလင်းတန်းများ
အဲဒီလိုလေး တွေးမိခဲ့တာ ကြာပါပြီဗျာ။ ကလေးဆေးရုံဆိုတာ အလီလီ အခါခါ ရောက်ခဲ့ရတဲ့ နေရာဖြစ်လို့ ဆေးရုံရောက်တိုင်း ဘုရားဒကာ ကျောင်းဒကာတွေကို ပြေးမြင်မိတယ်။ ဘုရားတွေတည် ကျောင်းတွေဆောက် နေတာကို မြင်ရင် သာဓုခေါ်ရမလား မသိခဲ့တာလဲ ကြာပါပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်က SF Bay Area စာပေဟောပြောပွဲတခုမှာ ဆရာဦးတင်မောင်သန်း ဟောပြောခဲ့ဖူးတာရှိတယ်..။ ကျောင်းကြီးတွေ ဆောက် ဘုရားကြီးတွေဆောက်ကြတာဟာ၊ မမြင် မသိရသေးတဲ့ နောင်ဘဝတွေမှာ သုံးစွဲဖို့ ကြိုတင် ဟွန်ဒီ လွှဲတာနဲ့တူတယ်ဆိုပဲ..။ ။
တကယ်ဆို ကိုယ်မသေခင် လက်ရှိဘဝမှာတင် အကျိုးဖြစ်ထွန်းနေတာကို ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ရပြီး၊ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်စေမယ့် ဆေးရုံတို့၊ စာသင်ကျောင်းတို့၊ မိဘမဲ့ ကလေးရိပ်သာတို့၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာတို့ကို ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းသင့်တာ မဟုတ်ဘူးလား။ (မြန်မာ)ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင် ဘုရားတွေတည်၊ (လောကီစာသင်ကျောင်းမဟုတ်တဲ့) ကျောင်းတွေဘဲဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးသိမ်တွေက ဘယ်တုန်းက စခဲ့တာပါလိမ့်..။
one of the best posts..
thank you, Ko Navana.